Ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra
"Ary vovotany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona izy." Genesisy 2:7
"Andriamanitra … nampihavana antsika taminy amin’ny alalan’i Kristy." 2 Korintiana 5:18
Ny olombelona, iza moa izy? Tsy fitambarana atôma misy singa mifampidipiditra sy mifamahofaho tsy takatry ny saina fotsiny ihany. Nomena fanahy izy, izay “fofonain’Andriamanitra”, satria noarìna tahaka ny endrik’Andriamanitra. Misaina izy, manana faniriana, mifandray aman’olona, mamoron-javatra… Ary misy dikany avokoa izany, satria taratry ny toetran’Andriamanitra, fa tsy vokatry ny asan’ny taova fotsiny.
Ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra, izay tapaka noho ny tsy fankatoavan’ny olombelona, dia tsy afaka ho tafaverina amin’ny alalana fisaintsainana fotsiny ihany. Andriamanitra no te hanambara ny tenany amin’ny olona. Izy no manao ny dingana voalohany. Ankehitriny Izy dia manatanteraka izany amin’ny alalan’ny Teniny, amin’ny alalan’ilay boky antsoina hoe ny Baiboly, ny “Soratra Masina”.
Koa dia ambaran’Andriamanitra amintsika, fa nahita lalana hamitranam-pihavanana amin’ny olona Izy. Izany no antony nanolorany an’i Jesosy Kristy Zanany, maty teo amin’ny hazofijaliana mba hanonitra ny fahotantsika izay nampisaraka antsika tamin’Andriamanitra. Dia natsangany tamin’ny maty Izy : velona Jesosy, Olona any an-danitra, “eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra”. Rehefa mino an’i Jesosy Kristy ny olona, dia afaka manana fifandraisana indray amin’Ilay Mpahary azy. Koa hiredareda ny fon’ny mpino, hanome voninahitra sy hanompo Ilay Andriamaniny, satria ny mpino dia “voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo” hotanterahiny (Efesiana 2:10).
Izany no dikan’ny fiainan’ny kristiana. Fiainana mendrika hiainana feno. “Fa Kristy no anton’ny ahavelomako” (Filipiana 1:21), hoy ny apostoly Paoly, ary azon’ny kristiana rehetra atao izany.